KHANDBARI CHASMA GHAR – sajilO Online
KHANDBARI CHASMA GHAR
लामो समयको कामको अनुभव बोकेर प्रोप्राईटर जीवन पौडेलले खादबारी बजारको पोखरी को माथिल्लो सईडमा खाँदबारी चस्मा घर खोलेका छन् ! सामान्य चेक जाच निशुल्क: गरिदिने र आवस्यता अनुसार तुरुन्तै चस्मा तयार गरिदिने भएकाले पनि यहा आउने बिरामी तथा ग्राहकहरू सन्तुस्ट देखिन्छन ! छिटो छरितो र कम मुल्यमा पावर चस्मा का लागि खादबारी चस्मा घर लाई सम्झना सक्नुहुनेछ ! यसका साथै यहा डाक्टरको पुर्जा लिएर आउनेहरूको चस्मा पनि तयार गरिनुका साथै सबै प्रकारका फेन्सी सनग्लासहरू पनि सुपथ मुल्यमा उपलब्ध छन् ! अझ तपाई सजिलो अनलाईनको मेम्बर हुनुहुन्छ भने त झनै बिसेस छुटको पनि ब्याबस्था गरिएको छ है ! एक पटक अवस्य पाल्नुहोला !!
PRO: JEEWAN POUDEL
Categories:	EYE CAREKHANDBARISANKHUWASABHA
यहा आँखाको जांच गरेर पावर चस्मा तयार गर्नुका साथै चेंजेवल ग्लास सुपथ मुल्यमा पाइन्छ ! र गगल्स र रिडिङ ग्लास पनि उपलब्ध छ ! थप जानकारीका लागि श्री जानकी आँखा अस्पताल गेट, जनकपुर – ८, Read more…